याै नकाे मामिलामा पुरुष उग्र महिला संयमित हुनुको कारण यस्तो !
सेक्स तथा यौन सम्बन्धको मामलामा महिला भन्दा पुरुष बढी तयार हुने गरेको तथ्यांक छ । यसका पछाडि विभिन्न कारणहरु पनि होला । नेपाली समाजमा त महिलाहरु पुरुषको तुलनामा खुल्न सकेका छैनन् ।
सेक्सको विषयमा कुरा गर्दा पनि महिलाहरु कमजोर हुनुको कारण यो एउटा हुन सक्छ । इच्छा भएर प्रकट नगर्नु वा खुलेर कुरा नगर्नुले गर्दा उनीहरु पुरुषको तुलनामा कमजोर हुन् कि भन्ने सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ ।
तर महिला र पुरुषबीचमा सेक्समा भिन्नता हुनुको पछि बायोलोजिकल कारण पनि छन् ।
यो कुरा लेखक समेत रहेका विक्रम सुब्बाले आफ्नाे फेसबुक वालमा राखेका छन् । सेक्सको मामिला पुरुषहरु उग्र हुनु र महिला संयमित हुनुको कारणबारे उनले कतैबाट साभार गरेर आफ्नाे वालमा यसरी लेखेका छन् ।
सेक्सको मामलामा किन पुरुष बढी उग्र र महिला संयमित देखिन्छन् ?
किनभने, पुरुषले हरेक पटक सास फेर्दा लगभग १० हजार सुक्रकीट उत्पादन गर्छ तेसैले पुरुष सेक्सको निम्ति हमेसा तैयार । तर, महिलाले १ महिनामा एउटा मात्रै डीम्ब (Egg) उत्पादन गर्छ र त्यहीबेला मात्र सेक्सको चाहना महिलामा ह्वात्तै बढ्छ ।
यसरी हेर्दा हरेक Mammal हरू पुरुष शुक्रकिट वितरक (Distributor) हुन् भने महिला चाहीँ शुक्रकिटका संरक्षक (Protectors) हुन । प्रकृतिले यसरी नै पुरुष र महिलालाई Design गरेको छ । तेसैले, पुरुष उग्र भएको र महिला शान्त भएको कुरा उनको चाहनाले भएको होइन Biology ले गर्दा हो । (Joe Quirk, Its Not You: Its Biology बाट)